Zvinopfuura Kutsvaga Injini Kugonesa | Martech Zone
Zvinopfuura Kutsvaga Injini Kugonesa
China, April 29, 2010 Muvhuro, April 11, 2016 Douglas Karr
Nezuro, ndakaita rovedzo yekutsvagisa injini uye ndakakoka vagadziri, vanyori, vanyori uye kunyange vakwikwidzi kuti vauye kuzodzidziswa. Yaive yakazara-imba uye yakafamba zvakanaka.
Kuiswa mumainjini ekutsvaga hakusi mhinduro nguva dzese - kambani inofanirwa kunge iine zvinobudirira zvemukati, yakanaka saiti, uye nzira yekuti vabatanidzwe nekambani.
Ini ndinofunga nezvangu senge yekutsvaga injini yekugadzirisa nyanzvi. Kune mazhinji emakambani, ini ndinokwanisa kukwidziridza masayiti avo kana mapuratifomu, ndichivapa ruzivo rwekuti vangatsvage sei mazwi makuru, uye ndovaratidza nzira yekuburitsa izvo zvemukati nenzira ichaona kuti vanowanikwa kwavanoda kuve.
Sezvo iwe paunotarisa mukati kusangano rako uye nekutsvaga kwako Injini Yekutsvagisa, pane poindi yekusadzoka kwako iwe zvakare. Ini handina basa nekuti wakaverenga zvakadii online nezve SEO, waunotenda, zvaunofunga kuti unoziva… hauna izvo zvinotora kufambisa tsono mushure meimwe pfungwa. Vazhinji vevatengi vandakashanda navo vane SEO hunyanzvi chinzvimbo chinoshamisa kwazvo kune mashoma mazwi - asi usashandure zvine mutsindo tarisiro dzakanyatsoita kune yavo saiti.
Kana iwe usina zviwanikwa zvekushandisa yevakuru femu, rega kutenderedza kutenderera. Kune akawanda nzira dzekutsiva pamusoro pekukwikwidza zvakanyanya, yakakwira vhoriyamu kiyi kiyi:
Iwe unogona kunge uchinangisa refu-muswe, anowirirana akakosha mazwi ayo anonyatso kuvandudza ako ekushandurwa mareti nekuti iwo anotungamira kune mashoma madiki eari nani anokwanisa tarisiro.
Iwe unogona kunge uchivandudza dhizaini yako saiti kuti ioneke seane hunyanzvi, inovimba sangano, kugadzirisa mafoni-kune-chiito, uye mapeji ekumhara - uchivandudza huwandu hweshanduko.
Iwe unogona kunge uchigadzirisa zvirimo zvako uye uchiita kuwanda-kusiyanisa kuyedza, a / b / n kuyedza uye kupatsanura-kuyedza kugadzirisa mwero wekushandurwa kwetarisiro iri kusiya yako saiti.
Iwe unogona kunge uchivandudza yako mazita emapeji uye meta tsananguro yekuvandudza kukosha kweako ekutsvaga enjini peji peji (SERP) kuitira kuti vamwe vanotsvaga injini vashandisi vatobaya zvako kupinda pane peji remhedzisiro. Tarisa yako tinya-kuburikidza mitengo muGoogle Webmaster Central.
Iwe unogona kunge uri kushandisa zvinobudirira zvemagariro enhau uye email kushambadzira kuita, kuitazve-uye kukwiridzira vatengi vako - kugadzirisa zvizere bhizinesi mhedzisiro.
Injini dzekutsvaga dzave svikiro rakakomba kumakambani anoendesa nzira dzekutengesa dzakawanda… asi hazvireve kuti iwe unofanirwa kunge uri kushandisa zviwanikwa zvako zvese kuyedza kusvina yega yega yekupedzisira kubva mazviri. Iwe unofanirwa kuisa mukushandira kwakaringana kutevedzera akanakisa maitiro, asi shandisa yako yekuwedzera nguva zvinobudirira. Kana chinzvimbo chemakwikwi akakosha mazwi akakosha ndiyo yako chete sarudzo kana ine yakanyanya kudzoka pane investment, invest in a yekutsvaga injini yekugadzirisa yakasimba sesu, DK New Media. Kana kudzoka kwekudyara kusipo, isa pfungwa dzako pane mamwe marongero anozowedzera mhedzisiro yako yebhizinesi.
Tags: Content MarketingEmail Marketingmazwi akadzamarefu-muswe keywordsmeta tsananguromazita emapejievanhu vezvenhauweb Design
Douglas Karr Thursday, April 29, 2010 Monday, April 11, 2016
Apr 29, 2010 pa 12: 31 PM
Ndinovimba vamwe vevagadziri vewebhu vakapinda vakadzidza zvinhu zvishoma. Hapana chakafanana nekumhanyira kumawebhusaiti anodhura mutengi madhijitari mashanu asina mazita emapeji kana meta tsananguro dzakaitwa nemazvo, kana idzo dzine dzakawanda dzimba ma URL. Uye chimwe chinhu ... anovaka webhusaiti vanhu, usavake kana kugadzirisa webhusaiti pasina kuita kiyi yekutsvaga kana kuita kuti mumwe munhu azviite. Inyaya yekushingairira kwakakodzera.